Tetikasa Lalan’ny landikely : Hampiasa vola 29, 6 miliara Ariary ny sinoa -
AccueilRaharaham-pirenenaTetikasa Lalan’ny landikely : Hampiasa vola 29, 6 miliara Ariary ny sinoa
Goavana sy manan-danja. Izany no entina hilazana ny tetikasa lehiben’ny Filoham-pirenena Sinoa Xi Jinping, rehefa nametraka ny fifehezana ara-toe-karenan’ny lalan’ny landikely na ny« ceinture économique de la Route de la soie ». Ity farany izay tsy inona akory fa fitohizan’ny lalan’ny sambo na ny seranam-piaramanidina avy any Sina mankany Eoraopa, Afrika ary Amerika. Sehatra ara-toe-karena sy ara-barotra izay ivelaran’i Madagasikara izany, raha ny nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina. Notontosaina omaly tao amin’ny Centre de Conférence Internationale (CCI) Ivato moa ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ ny fikambanana Sinoa ho an’ny finamanana amin’ny any ivelany na ny « Association du peuple Chinois pour l’amitié avec l’étranger » sy Madagasikara, izay notarihin’ny Minisitera misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena. Amin’ny alalan’izany lalan’ny landikely izany dia hisy ny fanamboarana ny seranan-tsambon’ny Toamasina, ny famelomana ny seranantsambon’ny Manakara, etsy andanin’izay ihany koa ny fanamboarana ny lalambe any Toamasina ary ny fanitarana ny Seranam-piaramanidin’Antsirabe sy Toliara. Mitentina 29.600.000.000 miliara Ariary kosa ny vola ampiasaina ny amin’ireo foto-drafitr’asa ireo. «Tetikasa iray izay fatra-paniry laza ny lalan’ny landikely, satria mampisy fifandraisana akaiky eo amin’ny Asia sy ireo firenena izay ao anatin’ny ranomasimbe Indiana. Mampandroso an’i Madagasikara eo amin’ny sehatra maro ihany koa izany, raha tsy hilaza fotsiny afa-tsy ny eo amin’ny ara-barotra, satria dia manafaingana ny fandefasana ireo entana sinoa makaty Afrika ary koa ny fanondranana entana makany ivelany », raha ny fanazavana nentin’ny Ramatoa LIN Yi, Filoha lefitry ny fikambanana Sinoa ho an’ny finamanana amin’ny any ivelany.
Tsy vao izao akory no nisy izany fiaraha-miasa teo amin’ny firenena Sinoa sy Madagasikara izany. Efa tany amin’ny taona 1972 no nipetraka ny fifanarahana, ary amin’izao fotoana izao dia mankalaza ny faha-45 taonan’izany fifandraisana ara-diplomatika izany ny roa tonta. Mivelatra amin’ny sehatra maro tokoa ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny Sina. Ary nitera-boka-tsoa maro teo amin’ny lafiny Varotra izany, satria raha araka ny antontan’isa voaray dia nitombo 40 isan-jato ny taham-panondranana entana nakany Sina, izany hoe, raha toa ka 102 560 000 USD izany tamin’ny taona 2012 dia tafiakatra hatramin’ny 144 070 000 USD kosa izany ny taona 2016.
« Ny fametrahana politika mazava momba ny fambolena, ny fizahantany, ny teknolojia vaovao, ary ny fampianarana sy fanofanana arak’asa ihany koa no isan’ny vahaolana ho an’ny tanora, Madagasikara rahateo manana tany malalaka azo ambolena » hoy ny ...Tohiny